Ny androaniko | Ngonongonona | 2
[Ngonongonona ] 25 Novambra, 2008 21:57
Fihavanana, adidy, fihatsaram-belatsihy.
Ny hazo voaroy ihany no hazo voangaly. Angaliko ianao raha tia ahy ; fa raha tsy tia ahy ianao, mba tofoka aho ; ary raha manova ianao mba afoiko ; fa ny “fitia mifamaly mahatsara fihavanana”.
Aza boraborahana ny fihavanana fa ny “fihavanana tahaka ny voara, ka raha vakina, misy vitsika”.
Manaova toy ny maso sy orona ka iray alahelo. Koa raha soa, miara-tsoa, ary raha ory, miara-mitondra.
Fanehoan’ny Ntaolo ny FIFANKATIAVANA sy FIHAVANANA ireo ambony ireo.
Ary mbola maro ireo Malagasy mbola mandala ny Fihavanana.
Rehefa lavitra ny tanindrazana dia tena aseho mihitsy io fifankatiavana io, ka azo lazaina mampiavaka antsika ihany amin-drizareo tandrefana izay samy maka ho azy izany.
Rehefa lavitra tanindrazana dia samy manana ny olona mahazatra azy hiarahana : mitovy fisainana, mitovy fiaviana, mitovy firehan-kevitra, mitovy lafin-kavana, mitovy finoana, mitovy asa, mitovy sekoly, mitovy fari-piainana, mitovy fahendrena, mitovy hadalana.
Rehefa lavitra tanindrazana dia mazavazava kokoa ireo fahasamihafana ireo satria kely ny sehatry ny fiaraha-monina.
Rehefa lavitra tanindrazana dia samy miady mafy amin’ny fiainana ary samy miezaka hanana ny tsaratsara kokoa. Misy ny mifanampy, misy ny mifaninana. Mety daholo izany fa ny tanjona dia hanatsara fari-piainana.
Fa rehefa lavitra tanindrazana ihany koa dia miova manaraka ny fiainana iainana ny dikan’ny Fihavanana :
- dia matetika mivadika hoe : tiavo ny namanao hihinananao ny hamaminao.
- dia matetika mivadika hoe : aleo very tsikalakalam-pihavanana toa izay very tsikalakalam-bola.
- dia matetika mivadika hoe : fihavanana fanambakana ny Fihavanana manomboka amin’ny renintsoratra F lehibe nolalain’ny Ntaolo (hoy izay Olon-dehibe nivahiny tato aminay izay rehefa nitafatafa momba ny fiovan’ny fihavanana aty ivelany izahay).
- dia matetika mihamafy ny hoe : havako raha misy patsa, fa raha lany ny patsa havan-tetezina.
- dia matetika fihatsaram-belatsihy sisa no anaovana ny adidy (voatery asaina na olona mahasosotra aza raha tena tsy azo ialana ; raha azo ialana moa dia vitaina amin’ny tsikitsiky fotsiny ; voatery vangiana ihany koa raha misy fahoriana fa tsy dia hoe avy amin’ny fo no hidododoana).
Ka rehefa atao ny kajy dia mihalefy ny fomba malagasy sy ny fandalàna ny Fihavanana rehefa lavitra tanindrazana. Tsy hoe tsy hita izay maharatsy azy fa lasa tsy dia laharam-pahamehana intsony fotsiny.
Raha misy ny disadisa eo amin’ny antokon’olona roa, dia azo atao mihitsy ny tsy mifanasa raha misy fifaliana. Tsy mahataitra ny manodidina na tsy voaasa aza ianao, tsisy manodidina tohina amin’izany akory. Tsy mikredy mihitsy ny manodidina rehefa misy évité fa tsy invité. Mandeha zatra ilay fiainana amin’io fa FIFALIANA sy FAHASOAVANA tsinona kah. Azo tsy iaraha-mizaka iny.
Raha misy ny disadisa eo amin’ny antokon’olona roa, dia azo ampandrenesina daholo ihany ny tapaka sy namana tsy ankanavaka raha misy fahoriana. Mahataitra ny manodidina raha tsy midododo ianao ilay azo tsy nasaina tamin’ny fifaliana. Mahataitra ny manodidina raha tsy voaantso ianao, tsisy manodidina tsy tohina amin’izany. Mikredy mihitsy ny manodidina fa tsy misy azo évité-na. Mandeha zatra ilay fiainana amin’io fa FAHORIANA tsinona kah. Azo/mila iaraha-mizaka iny.
Dia miala tsiny miala fondro aho raha tohina daholo ny manodidina fa amiko ny hoe Fihavanana dia avy amin’ny FO ny fiaraha-mitsiky raha misy fifaliana, ary fiaraha-miondrika raha misy fahoriana. Impiry moa no melohina ny “manao maty vao ramalala” !
Rehefa avy tsy niara-nifaly nandritra ny fotoana maro ve dia TSY MAINTSY hiara-hiondrika amin’ny andro iray amin’ny anaran’ny fihatsarambelatsihy. Dia rehefa hisaraka, dia fiteny ny hoe “eny ary fa dia tsy ho ny ratsy intsony anie no hifanodiavantsika fa mba ho ny tsara indray”, nefa dia haiko izao – satria efa nataony ahy indray mandeha - fa rahampitso raha mifanena eo am-bavahadinay indray izahay (fa miasa ao amin’ilay mpifanolo-bodirindrina aminay izy) dia hahodiny toa ny mahazatra ny lohany.
Dia hitako miala any indray ny kristiana be vontom-pinoana : "aza manao an'izany ianao fa hoy ny baiboly hoe raha misy..." HALTE !!! Tsia ; raha misy mamelaka ny takolako havanana, tsy omeko kosa ny havia fa narary kle ! Tonga dia direkta be tsisy alaharo no valiny. Miala tsiny fa fitia mifamaly io.
Tsia, manaja ny safidin'ny hafa aho. Raha te-hamitram-pihavanana amiko ny olona iray dia afaka nanao izany ary afaka hanao izany fa tsy miandry fahoriana hidona vao voatery hanao izany. Samy olon-dehibe dia samy tompon’andraikitry ny fihetsiny sy ny fisainany. Izy no tezitra ka tsy azoko terena handravona fihavanana izy raha tsy vokatry ny fony.
Ary miangavy ny manodidina aho mba tsy ho tohina amiko amin’ny fihetsiko amin’ny androm-pahoriana toa ny TSY nahatohina azy ireo tamin’ny androm-pifaliana.
Ny fihetsiko tsy fanivaivana ny maty akory, fa ny maty tsara levenana, ny velona kosa no homem-boninahitra – kanefa ny voninahitra hifanomezana fa tsy omen’ny iray fotsiny. Toa ny nataoko tamin’ny maty rehetra (Rado, Père Ralibera, Miriam Makeba, raha tsy hitanisa afa-tsy ireo aho) dia naondriko ny lohako, nanokana 10 mn fanajana azy aho. Ary mino aho fa nahafaly kokoa ny maty raha nidododo nijery azy fony narary ireo maro nidodododo nony lasa izy – na nidodododo nony efa teo am-bavahoan’ny ora farany izy.
Tsy araham-pihatsarambelatsihy ny Fihavanana, raha tsy izany dia aleo apetraka an-tsisiny izy aloha dia aleo samy maka ho azy toa ny tandrefana.
POURQUOI JE BLOGGUE POUR LE FIHAVANANA angamba no tsara natao lohatenin’ity.
[ (16) Hevitra ] | [ (0) Verindrohy (trackback) ] | [Rohy maharitra]